Ankylosis - isifo okungukuthi e baxhashazwe ephelele amalunga omzimba. Isizathu abukeke - iyona izinguquko sokugembula kubangelwa ikakhulu ngenxa yokulimala, samathambo noma i-osteoarthritis. It kubonakala kancane kancane, okokuqala e yinkimbinkimbi ukunyakazisa amalunga omzimba akuzona kangako, kodwa ngokuhamba kwesikhathi kancane kancane yiyo yonke ukuhamba.
Kukhona izimbangela ezimbalwa izifo ezifana ankylosis we ngokuhlanganyela. Omunye esivame kakhulu ukuvuvukala emalungeni, okusho sokuqaqamba kwamalunga noma i-osteoarthritis. Futhi, ngesizathu kungaba ukwa emalungeni, nesuka yokuthi ubuso bayo ugoqiwe, noma ukuhlukumezeka okukhululekile ubomvu, okuholela ukubhujiswa ebusweni ngokuhlanganyela. Ngaphezu kwalokho, kuvela, ankylosis - isifo esingaphatha zenzeka ngenxa kokuhlala isikhathi eside ukhonkolo. Kukhona amacala lapho ankylosis iba umphumela ukutheleleka ekwelapheni kuhlinzwa yanoma yisiphi esinye isifo.
Ankylosis zingahlukaniswa ngamaqembu amabili: esihlasela amathambo futhi fibrous. umehluko lawo eliyinhloko ukuthi ukuhamba lokuqala engekho ngokuphelele, futhi engxenyeni yesibili likhona. Lokhu kungenxa yokuthi nge ankylosis fibrous amalunga omzimba phakathi imikhawulo kuyinto ungqimba elincane izicubu lunemicu ingaqukatha izinsalela of uqwanga.
Kukhona wahlukanisa ankylosis okuphelele futhi ayiphelele. Ngezinye emalungeni umnyuziki yisimo ngokuphelele, futhi lokhu akashintshile, futhi amanothi akuphelele ukuhamba kancane, okuyinto kungenzeka, kungenzeka ukuthuthukisa futhi ukwandisa.
Contracture - ziwohloke ukuhamba ngokuhlanganyela. Lokhu kungenxa umonakalo ezithambile izicubu, okuholela izinguquko umsebenzi ngokuhlanganyela, okusho baxhashazwe. Ngamagama alula, kuba nobunzima flexion noma isandiso, ezifana unengalo noma umlenze. Contracture amalunga - lesi sifo esivame kakhulu, okuyinto manje noma ngokuhamba kwesikhathi ubhekene cishe wonke umuntu empilweni yami. Nakuba izandla zakhe ngokuvamile asibi umthwalo osinda kangaka, ezifana imilenze, namanje ngisho izinguquko kancane umsebenzi motor amalunga izenze wazizwa ngokuphazamisa enze ngisho ajwayeleke kunawo wonke zasendlini.
Contracture kungenziwa hhayi ngazuza kuphela kodwa futhi isegazini. contracture azalwa naso iyindlala, njengoba isizathu esiyinhloko nesenzakalo salo imisipha ampofu. Futhi yokufuna - Kuyaziwa, njengoba kungase kubonakale ngenxa yokulimala noma ukuvuvukala. Ngaphezu kwalokho, imbangela ukuqina kungenzeka ukuthi ucindezelekile ngoba kungalimaza isimiso sezinzwa. Yingakho ukucindezeleka okunzima e abantu kungaba jam entanyeni, noma, isibonelo, kuyinkimbinkimbi umlenze ukuhamba ngemva kokushaywa unhlangothi. Uma ilunga ngeke esikhundleni isikhathi eside (amasonto ambalwa), kungaba nemiphumela emibi engelapheki. baxhashazwe eziphikelelayo kungase kubangele isifo njengoba ankylosis ngokuhlanganyela, lesi sifo singumbulali ngempela njalo futhi sína.
Ankylosis - lesi sifo, i-main lohulumeni okuyinto ukuqina ngokuhlanganyela. Zonke ezinye uye sincike isimo lapho kwakukhona nenkanuko edlulele esitho. Ngokwesibonelo, uma kwenzeka ngesikhathi lapho umlenze is flexed ke kamuva lokho kuyoholela ubunzima obukhulu ukuhamba. Futhi uma ukulungisa iphutha ngenkathi umlenze kancane izimisele esimweni esifanayo, noma iqonde ngokuphelele, kancane scary, kusukela kulokhu muntu uzokwazi ukuhamba.
ankylosis fibrous ephelezelwa ubuhlungu emalungeni, okungenani ingxenye, futhi ukuhamba agcinwe. Lapho ithambo ankylosis akukho ukuhamba, akukho ubuhlungu.
okhalweni Joint ukuqina ubunzima ekuhambeni futhi izinyonga. Abesifazane kwezinye izimo, lokho kungase kubangele ubunzima esenzweni socansi. Ukuba khona ubuhlungu - hhayi isici saziso, kwezinye izimo, ubuhlungu Ingase ithanyelwe, futhi abanye ungapheli. ankylosis Bilateral okungenani yimani niqonde futhi kubangela ukuhamba, kodwa namanje kungenzeka. Ukuyisa Kulezo zimo phambili variable Ukuhanjiswa kwesokunxele ke isigamu kwesokudla ukhalo. Uma ankylosis zamazwe amabili esimweni ngonya, uhamba, ngeshwa, akunakwenzeka.
Uma uneminye izinsolo ukuthi noma ankylosis contracture, kufanele ngokushesha ukuya inhlolovo. Neendaba ezifana kufanele kube udokotela ohlinzayo noma traumatologist. Ucwaningo kuhlanganisa ekuhlaziyweni izikhalazo lesiguli kanye izimpendulo zemibuzo ngempilo amalunga, umlando wezokwelapha kanye kokuhlola joint ethintekile ukuhamba. Ngemva ukuhlolwa isiguli ithunyelwa onguchwepheshe ukwenza ze-X ray. Futhi, isiguli kufanele ibhekane resonance kazibuthe kanye computed tomography.
ukuphathwa Ankylosis has ezimbili okufanele akhethe kuzo: ngoludala futhi op. ekukhetheni kwaKhe kuthinta ezihlukahlukene nezifo kanye cwaningo. Kodwa noma kunjalo ukuqala kusenesikhathi ungagcina ukwelashwa kunokwenzeka. Ngaphezu kwalokho, kumele kube olunzulu.
Lapho ukwelashwa ngoludala umgomo oyinhloko webhayisikobho ethile resumption egcwele ukuhamba ngokuhlanganyela, ukuzinza imisebenzi yayo, nokuqedwa ubuhlungu kanye muscle ukuvuselelwa. Conservative ukwelashwa indlela kufaka yokuzijwayeza ekhethekile, okuyinto siqondiswe i kushintshana voltage emikhawulweni okuyizinto ukhonkolo, ukuxhaphaza, ukwamukelwa kwenkolelo-ze izidakamizwa ezingekho steroidal elizovimba ukuvuvukala, massage zokwelapha. ukwamukelwa Futhi kule indlela yokwelashwa ngokuvamile ezinqunyiwe kusho, abacindezela ubuhlungu, futhi ama-hormone.
Ukuze ukwelashwa eziyinkimbinkimbi ngokuvamile inikezwa amasu Physiotherapy ezahlukene ezifana electrophoresis, eyenziwe imisinga sinusoidal (SMC) kanye therapy ultrahigh-imvamisa (UHF). Ngalesi sihamba ukuvuvukala, ukuvuvukala, ubuhlungu futhi ukuhamba ibuyisela kahle kakhulu.
Uma ilunga akuyona umile ngokuphelele, okusho ankylosis has simise lunemicu ekwelapheni ankylosis we ngokuhlanganyela kungathatha indawo ngokusebenzisa ukuqaliswa oscillation. Kodwa le nqubo kumele sihambisane izinzwa njengoba ubuhlungu uqine ngokwanele. Futhi, uma amukelekile ankylosis fibrous nokuhlinzwa, okungukuthi arthroplasty, lapho amalunga omzimba Unqanyuliwe, ukudala entsha articular ebusweni, gasket ibekwe therebetween lendwangu plastic. Uma inkinga ngokuphazamisa kwamalungu omzimba, ngisho ke ungakwazi ukulungisa by eqondisa nasemilenzeni ke. Uma kunjalo, endabeni 'ankylosis "izimila eziyinkimbinkimbi futhi kwatholakala ukuthi nginesifo - yilokhu cishe elinde isiguli.
Ukuze umonakalo ngokuhlanganyela athuthukile ibe ankylosis, ukwelashwa kufanele ziqalise ngesikhathi esihle futhi noma kunjalo ukuba bangakushayi indiva lolu daba. Kungenjalo isimo ngeke kuphela sibi nakakhulu futhi isimo sibe esingathi sina nakakhulu. Ukwelashwa kufanele kufake ukwenza ukuzivocavoca ekhethekile, ukwamukelwa kwenkolelo-nemithi.
umzimba zokwelapha - lena iphuzu elibaluleke kakhulu. Kuyasiza ukubuyisela ngokuhlanganyela ehlaselwe iminyakazo ethile ukuthi ukuthuthukisa ke. Ngaphezu kwalokho, umzimba uyobe ukuvimbela ukulahleka emalungeni eduze. Futhi, ungagxambukeli ne gqwa elashwe ngokomzimba ukwelashwa, ukubhucungwa umzimba kanye ukwelashwa okukhethekile impilo yokungcebeleka Spas.
Amaqhubu wonke umzimba: izimbangela kanye nokwelashwa
Deforming arthrosis we ngokuhlanganyela amadolo - isenzakalo kudokotela ngokushesha!
Lithembekile futhi ohlakaniphile Bergamo uMalusi
Umlingisi Sergei Gubanov: Filmography, empilweni yakho
Ukuzingela nokudoba eSiberia: izimpawu ezisemqoka
I-Corrector yamashiya: izici zokusetshenziswa, izinhlobo nokubuyekezwa
I enamathela zokuzivikela "Raptor": Umbala, ubuchwepheshe, izinzuzo kanye nokubuyekeza. ikhava imoto "Raptor"
"Mowgli" Ngubani wabhala lokhu? "Mowgli", Kipling
Fondorentabelnost sikhombisa inzuzo kwezimali ezimpahleni ezingasuki phansi